चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट निष्कासित भए पूर्वमन्त्री समेत रहेका यी चर्चित नेता, यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट निष्कासित भए पूर्वमन्त्री समेत रहेका यी चर्चित नेता, यस्तो छ कारण
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना उच्च अधिकारीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार पार्टी अनुशासन र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा पूर्वन्याय मन्त्री एवं चिनियाँ प्रहरीका उपप्रमुख फु झेङहुवालाई निष्कासन गरिएको हो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग र राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण आयोगले बिहीबार झेङहुवालाई पार्टीबाट निकाल्ने र सार्वजनिक पद धारण गर्न नदिने निर्णय गरेको हो। झेङहुवामाथि गत अक्टोबरदेखि अनुसन्धान थालिएको थियो।
६७ वर्षीय झेङहुवा कुनै बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा निकै प्रभावशाली मानिएका थिए। सन् २०१३ मा उनले चीनका पूर्वसुरक्षा प्रमुख झोउ योङकाङविरूद्धको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। २०१५ योङकाङलाई आजीवन काराबास सजाय सुनाइएको थियो। झेङहुवा सन् २०१८ देखि २०२० सम्म चीनका न्याय मन्त्री थिए।
यसैबीच उता पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउन पछिल्लो समय विपक्षीहरू एक हुँदै गएका छन् । यो इमरानको राजनीतिक जीवनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठानिएको छ ।
खानको तहरिक–ए–इस्लाम पार्टीसँगै गठबन्धनमा आबद्ध मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी) बुधबार विपक्षमा लागेपछि भने खानको पद धरापमा परेको छ । एमक्यूएम–पी बिना इमरानसँग अब बहुमत सांसदको समर्थन नरहेको विपक्षीहरूको दाबी छ । सरकारले अल्पमतमा परेको दाबी अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री खानले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संसद्ले आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।
पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जर्दारीले खान नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाइसकेको र अब विपक्षी दलका नेता सेहबाज सरिफ चाँडै प्रधानमन्त्री बन्ने बताइसकेका छन् ।
‘एमक्यूएम–पीलाई विपक्षीसँग हात जोड्ने र अविश्वासको मतमा इमरान खानविरुद्ध मतदान गर्ने साहसी निर्णय गरेकामा आभार प्रकट गर्दछु,’ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयमा बिलावल भुट्टोले भनेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि बिहीबारदेखि छलफल सुरु भएको र सोमबार मतदान हुने जनाइएको छ ।
भुट्टोले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ सहबाज सरिफ छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने र नयाँ सरकारले ‘लोकतन्त्रको पुनःस्थापना, आर्थिक संकटको अन्त्य र पारदर्शी चुनाव गर्ने’ उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सेहबाज सरिफले प्रधानमन्त्री खानलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ‘इमरान खानसँग अब कुनै विकल्प बाँकी छैन । या त उनी अब राजीनामा दिन सक्छन् वा अविश्वासद्वारा बर्खास्त हुन सक्छन्,’ सरिफले भने ।
सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले भने प्रधानमन्त्री खानले अविश्वासको मतभन्दा अगाडि सत्तारूढ गठबन्धन छाडेर हिँडेका केही सहयोगीसँग बढ्दो दबाबको सामना गर्नु परिरहेको भए पनि उनले राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
३४२ सदस्यीय पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा सरकार गठनका लागि १७२ सिट आवश्यक पर्छ । एमक्यूएम–पीको समर्थनसँगै विपक्षी गठबन्धनसँग अब १७५ सिट पुगेको छ भने इमरान नेतृत्वको सरकार १६४ मा सीमित भएको छ ।
पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कुनै पनि प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल पदमा टिकेका छैनन् । इमरान खान सन् २०१८ मा भएको चुनावमार्फत प्रधानमन्त्रीमा विजयी भएका हुन् । प्रधानमन्त्री बन्ने बखत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र संकटपूर्ण अर्थतन्त्र सुधार्ने वाचा पूरा गर्न भने खानले उल्लेखनीय कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय बढ्दो मुद्रास्फीति र उकासिएको विदेशी ऋणका कारण खान सरकारको सार्वजनिक आलोचना निकै बढेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०२० को जनवरीदेखि २०२२ को मार्चसम्म पाकिस्तानमा खाद्यान्नको मूल्य २३ प्रतिशत बढेको जनाइएको छ ।
विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबीच खान आइतबार राजधानी इस्लामाबादमा आयोजित एक र्‍यालीमा सहभागी भएका थिए । आफ्नो लोकप्रियता कायमै रहेको देखाउन गरिएको ठानिएको र्‍यालीमा समर्थकहरूको ठूलो उपस्थिति थियो ।
र्‍यालीमा बोल्दै खानले ‘सरकार गिराउन विदेशीहरूले षड्यन्त्र गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको’ दाबी गरेका थिए । खानले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र आसिफ अलि जर्दारीलाई संकेत गर्दै उक्त अभिव्यक्ति दिएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले इमरान खान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र विदेश मामिलामा सम्झौताकारी नीति अख्तियार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
तर कतिपय मन्त्रीहरू भने खानको क्रिकेटरको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै बचाउमा उत्रेका छन् । तीमध्येमा गृहमन्त्री र सूचनामन्त्री अग्रमोर्चामा छन् । ‘प्रधानमन्त्री खान अन्तिम बलसम्म भिड्ने खेलाडी हुन् । उनले राजीनामा दिने छैनन्,’ सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
पाकिस्तानको संसद्मा खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि बिहीबारदेखि छलफल सुरु भइसकेको छ । खानमाथि आफ्नो दलका सांसदलाई एकजुट राख्ने र गठबन्धन सहयोगीलाई आफ्नो पक्षमा मतदानका लागि सहमत गराउने अन्तिम विकल्प मात्र बाँकी छ ।
पाकिस्तानले पछिल्लो समय चरमपन्थी संगठन तहरिक ए तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी) का हिंस्रक गतिविधिको सामना गरिरहेको छ । रमजान सुरु हुनुअघि नै पाकिस्तान सैन्य बलविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको टीटीपीले अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा बुधबार गरेको आक्रमणमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
घटनापछि सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध पनि थप बिग्रेको कतिपयको विश्लेषण छ । यसअघि सन् २०२१ को अक्टोबरमा पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख फैज हमिदलाई हटाउने विषय विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
पाकिस्तानमा सरकार गठन तथा सत्ता सञ्चालनका लागि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता पाकिस्तानमा ४ पटक सैन्य ‘कु’ र त्यति नै पटक सत्ता परिवर्तनको प्रयास भइसकेको छ ।
को बन्ला नयाँ प्रधानमन्त्री ?
अविश्वासको प्रस्तावमाथि सोमबार हुने भनिएको मतदानमा इमरान खान पराजित भएको खण्डमा पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का नेता सेहबाज सरिफ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ हुन् ।
नयाँ सरकार गठन भएको खण्डमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का बिलावल भुट्टो जर्दारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका मिल्ने देखिन्छ । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो तथा पूर्वराष्ट्रपति आसिफ अलि जर्दारीका छोरा हुन् । यस्तो अवस्थामा खानले नयाँ सरकार गठन हुन नदिन चुनावको घोषणा गर्न सक्ने कतिपयको आकलन छ । पाकिस्तानमा सन् २०२३ को अक्टोबरमा चुनाव तोकिएको छ ।
पाकिस्तानमा यसअघि सन् १९८९ मा बेनजिर भुट्टो र सन् २००६ मा सौकत अजिज गरी दुई सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका थिए । अब खान अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तेस्रो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीजस्तै उनले आफ्नो पद बचाउन सक्लान् त ? त्यसका लागि संसद्मा हुने मतदान कुर्नैपर्ने भएको छ । मतदानमा जोसुकैले जितून् तर फेरि एक पटक पाकिस्तान र पाकिस्तानी जनताले हार्नेमा भने दुईमत छैन ।